विश्वकप फुटबल- प्रिक्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा
काठमाडौँ । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता २०१८ को प्रिक्वार्टरफाइलन समीकरण पूरा भएको छ । मंगलबार सम्पन्न अन्तिम प्रिक्वार्टरफाइनलमा इंग्ल्याण्डले कोलम्बियालाई पराजित गर्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थ...
मेक्सिकोलाई हराउँदै ब्राजिल अन्तिम ८ मा प्रवेश
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलमा मेक्सिकोलाई हराउँदै ब्राजिल अन्तिम ८ मा प्रवेश गरेको । विश्वकपको दावेदार मानिएको मेक्सिकोलाई पराजित गर्दै ब्राजिल विश्वकप फुटबलको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । सोमबार र...
हिमालयन क्लबलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै आर्मी सेमिफाइनलमा
काठमाडौँ । ललित स्मृति अठार वर्षमुनि यु–१८ को राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोयगितामा सोमबार भएको पहिलो क्वाटरफाइल खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भएको छ । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्ले...
मेक्सिकोलाई नकआउटचरणको पहिलो शिकार बनाउने योजनामा ब्राजिल
काठमाडौँ । समूह ‘इ’ को विजेता ब्राजिल समूह एफको उपविजेता मेक्सिकोलाई नकआउटचरणको पहिलो शिकार बनाउने योजनामा छ । सामरा एरेनामा राती पौने ८ बजे हुने प्रतिस्पर्धामा १६ वर्षदेखिको उपाधि भोकमा रहेको ब्राजिल...
काठमाडौं । विश्व फुटबलका महान् खेलाडीद्वय पेले र म्याराडोनाको पुस्तापछि त्यो उचाइमा अन्य खेलाडीको नाम आएको छैन । तर अहिले बहस तीव्र बनेको छ, वर्तमानका महान् खेलाडी को हुन् ? लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो...
अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरियो : फ्रान्स विजयी
काठमडौं । विश्वकपको विजेताको दावदार मानिएको अर्जेन्टिना विश्वकप प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । नकआउट चरणको पहिलो खेलमा फ्रान्ससँग ४–३ ले पराजित हुँदै अर्जेन्टिना रुस विश्वकपबाट बाहिरिएको हो । अघिल्लो सं...
सकियो समूह चरणका खेल, कुन राष्ट्र छनोट भए, कुन बाहिरिए ?
रुसमा जारी फिफा विश्वकप २१ औं संस्मरणको प्रतियोगितामा बिहीबार रातिका खेल सकिँदा समूह चरणका बसै खेल सकिएका छन्। सहभागी ३२ राष्ट्रमध्ये १६ राष्ट्र नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। १६ राष्ट्र रुस विश्वjपको ...
पराजित भएर पनि जापान अन्तिम १६ मा
कोलम्बिया र जापान विश्वकपको समूह एचबाट क्रमशः विजेता र उपविजेताका रुपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् । रुस विश्वकप अन्तर्गत समूह ‘एच’ बाट कोरिया र कोलम्बिया अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार सा...
काठमाडौं । रुस विश्वकपमा नाइजेरियालाई २-१ गोल अन्तरले हराउँदै आर्जेन्टिना प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। उक्त हारसँग 'सुपर इग्लस' पनि भनिने नाइजेरिया विश्वकपबाट बाहिरिएको छ। अन्तिम समयमा ...
काठमाडौं । एसियाडको तयारीको शिलशिलामा नेपाल राष्ट्रिय बक्सिङ टोली बैदेशीक प्रशिक्षणका लागि थाइल्यान्ड जाने भएका छन् । बुधबार थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्ने टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव केशव ...
काठमाडौं । ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष माननीय जीवन राम श्रेष्ठले अन्र्तराष्ट्रिय सेपाकताक्रो महासंघका डाइरेक्टर जनरल तथा महासचिव डाटो अब्दुल हालिम विन कादर र नेपाल सेपाकताक्रो संघ पदाधिकारीहरुसंग सिष्ट्रा...
मस्को, रूस । विश्वकप फुटबलको शनिबार भएको पहिलो खेलमा ट्यूनिसियाविरूद्ध ५–२ को फराकिले अन्तरले जितेको छ । यससँगै बेल्जियम विश्वकपको अन्तिम १६ समूहभित्र पर्ने सम्भावना प्रवल भएको छ । अन्तिम १६ मा पर्...
काठमाडौं । रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा आज शुक्रबार ३ खेलहरू हुँदैछन्। समूह चरण दोस्रो राउन्ड अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा समूह इ मा रहेका ब्राजिल र कोष्टारिकाबीच प्रतिस्पर्धा ह...
रुसमा भइरहेको फिफा विश्वकप प्रतियोगितामा मंगलवारको खेलमा जापानले कोलम्बियालाई एकका विरुद्ध दुई गोलले पराजित गरेको छ। जापानको आश्चर्यजनक जित भनिएको उक्त खेलमा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियाको टोलीका...
बाजुरा । बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम मेयर कप जिल्लास्तरीय खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि बूढीगंगाले हात पारेको छ । आयोजक बूढीगंगाले त्रिवेणी नगरपालिकालाई पराजित गर्दै सो ...
काठमाडौं । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तरगत बेल्जियमले प्रभावशाली सुरुवात गरेको छ । समूह जी को सोमबार राति भएको खेलमा बेल्जियमले पनामालाई ३–० ले पराजित गरेको हो । बेल्जियमको सहज जितमा म्यानचेस्टर य...
काठमाडौं । विश्वकप फुटबल अन्तर्गत चौथो दिनको खेल सकिंदासम्म केही आश्चर्यजनक नतिजा निस्किएका छन् । विश्वकपको दाबेदार मानिएको ब्राजिलले पहिलो खेलमा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली समय अनुसार गए मध्यराती ...
काठमाडौं । विश्वकप फुटबल २०१८ को दाबेदार मानिएको जर्मनी मेक्सिकोसँग एक—शून्यले पराजित भएको छ । समूह एफ अन्तरगतको पहिलो खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीलाई मेक्सिकोले स्तब्ध पारेको छ । मेक्सिकोका लाग...